Opinions & Discussion » ပါလေရာ ငပိချက် ဒို့မြန်တြံ့စစ်တပ် Filthy	11
ဇီဇီခင်ဇော် says: အေးးဆို
kai says: အမဲတွေဆန္ဒပြတဲ့.. ဖာဂူုဆန်မြို့မှာ.. ရဲကသုံးတာ.. စစ်တပ်ပစ္စည်းတွေများသမို့.. သမ္မတအမိန့်နဲ့.. ပိတ်လိုက်တာပါ…။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဟုတ်တယ်..
မင်း ခန့် ကျော် says: ဝေလုကြော်ပုံလဲတွေ့ပါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 527
ဂျက်စပဲရိုး says: The Siege ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကား ထဲမှာ ကြည့်ဖူးတယ်။
အဲဒါကို စစ်ဘက်က လူကြီး (Bruce Willis) ပြောသွားတာ သဘောကျလို့ General William Devereaux: The Army isabroad sword, notascalpel. Trust me, senator – you do not want the Army in an American city. တကယ်က မြို့ထဲ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စ ဆိုတာ မြို့ထဲ ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း နဲ့ ပြီးရမှာ။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: . မင်္ဂလာဈေးဖြစ်ရပ်ကို ကြည့်ရင် လျှပ်စစ်လိုင်းက welding ဆော်ခွင့် မပြုသင့်တာ အဓိကပါ ဒီလို အများသုံးအဆောက်အဦး (တခုခုဖြစ်ရင် ဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ building မျိုးမှာ) power line ကို ဆက်ပြီး welding ဆော်တာ လုံးဝ (လုံးဝ) ခွင့်မပြုရပါ။
အောင် မိုးသူ says: သနားလို့စ် မျက်ရည်တစ်စက်ကျသွားတယ် တောက်စ်
alinsett says: အဲ့ကို လာတဲ့ စစ်သားတွေကိုပဲ… သနားစဖွယ် ဖြစ်အောင် ပြောကြ ရေးကြတာလည်းး ဖေ့ဘုတ်မှာ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။
Ma Ma says: (ဒွတ်ခ ဒွတ်ခ.. ဘယ်သူ့ကို ပိုသနားရမှန်း မသိတော့ဘူး.. )
uncle gyi says: မီးကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လုပ်ထားတဲ့ရေဖြန်းခေါင်းတွေရေပိုက်တွေ
CharTooLan says: ဟဟား ရီရမယ့်အရှိန်ကဒီမှာပိုမြင့်တက်လာဒရယ် ဟဟား :P